संविधान जारी भएको उल्लासले छोएन राजी महिलालाई |
संविधान जारी भएको उल्लासले छोएन राजी महिलालाई
प्रकाशित मिति :2015-09-22 14:07:32
कैलाली, असोज ५ । ‘नेपालको संविधान २०७२’ जारी भएको हर्षोल्लास चारैतिर थियो । असोज ३ गते राष्ट्रपतिले संविधान जारी गरेपछि असोज ४ गते अर्थात सोमबार विभिन्न ठाउँमा र्‍याली, चियापान गरी नयाँ संविधानको स्वागत हुँदै थियो । तर, कैलालीको खुटिया खोला किनारमा भने ३ गते अघिकै सुनसान छाएको छ । जहाँ निुमखा महिलाका निर्दोष हात ढुङ्गा र गिट्टीसँग संघर्ष गर्दै थिए ।
वर्षौदेखि खुटिया खोला किनारमा ढुङ्गा फुटाएर गिट्टी बेच्दै आएकी वल्मी निवासी चौठी साउँदलाई नयाँ संविधानले कत्ति पनि छोएको छैन । न उनलाई कसैले हाम्रो संविधान हो, खुसियाली मनाउनु पर्छ नै भनेका छन् ।
तस्वीर \_कैलालीको खुटिया नदी किनारमा गिट्टी कुट्दै चौठी
कसैले भनेको भए पनि उनलाई फरक पर्दैनथ्यो । किनकी चौठी जस्ता निमुखा श्रमजीवि महिलालाई पेट पाल्नै धौ धौ छ । संविधान आउनु नआउनुसँग उनीहरूलाई कुनै चासो छैन ।
‘संविधान भनेको के हो ? हामीलाई त थाहा छैन नानी’ ढुङ्गा फुटाउन उठाएको हतौडी रोकेर उनले भनिन् – यो आएपछि के हुन्छ, ‘यसले के दिन्छ हामीलाई ?’
हरेक विहान खाना खाएर उनी आफ्ना श्रीमान नरी साउँदसँगै गिट्टी कुट्न खुटिया किनार पुग्ने गर्छिन् । खुटिया पुल छेउमा रहेको बाँझो जमिनमा रहेको छहारीको आड लिएर उनी काम गर्छिन् ।
खुटिया छेउको बाँझो जमिनमा गिट्टी फुटाएर पेट पाल्दै आएका थुप्रै महिला छन् ।
आईतवार संविधान जारी भयो । सोमबार सवै संविधान आएकोमा खुशीयाली मनाउन तयारी गरिरहेका बेला उनीहरू पहिले जस्तै सबैजना गिट्टी फुटाउन विहानै पुगिसकेका थिए । उनीहरूलाई देशमा संविधान आओस या नआओस कुनै मतलब छैन । मतलब छ त आफ्नै काम र दिनचर्यासँग ।
‘हामीलाई कसरी दिन गुजारा गर्ने भन्नेमात्रै चिन्ता छ’ अर्की सुनकलीले भनिन् ‘गिट्टी फुटाउन सकिएन भने छाक टर्दैन । हामीलाई संविधानले के दिन्छ ?’
गिट्टी वेचेर कमाएको पैसाले घर खर्च चलाउने र केटाकेटीको पढाई खर्च जुटाउने गरेको उनीहरुको भनाई छ । फुटाएको गिट्टी एक हजार प्रतिघन मिटरका दरले वेच्ने गरेको चौठीले बताइन् । उनले यसैबाट आफ्नो नुनतेलको खर्च जुटाउँदै आएको उनले बताइन् ।
तस्वीर\_ कैलालीको चौमाला ९ राजी वस्ती
उनले एक महिनामा दुई घनमिटरसम्म गिट्टी फुटाउँछिन् । गिट्टी किन्न ट्याक्टर लिएर ग्राहक उनीहरूकहाँ नै आउँछन् ।
कैलालीको चौमाला ९ राजी बस्तीकी २७ वर्षीया हसिना राजी सोमबार घरमा केटाकेटीसँगै थिइन् । राजीका श्रीमान्ले रेडियो सुनेर भएपनि संविधान आयो भन्ने थाहा पाएका रहेछन् । तर, राजीलाइृ यसवारे कुनै चासो थिएन । ‘श्रीमान दिर्घ राजी भन्दै थिए’ ‘संविधानले के गर्ने हो भनेर हसिनाले सोधिन् ।’
त्यसैगरी स्थानीय वसन्ती राजीले आफूहरूलाई संविधान के हो भन्ने जानकारी नै नभएको बताइन् । राजी वस्तीमा कसैको घरमा टिभी नभएकाले उनले संविधानका बिषयमा केही खबर पाउन नसकेको बताइन् ।
‘हामीहरूले कसरी देख्ने ? घरमा टिभी छैन्,’ स्थानीय वसन्ती चौधरीले भनिन् ‘ ब्याट्री किन्न पैसा नभएर रेडियो त्यसै फालेको छ ।’
अल्पसंख्यकका रुपमा रहेका राजी समुदाय वनजंगलमै आश्रित सुमदायका रुपमा चिनिन्छ । पछिल्लो समयमा वनजंगल र खोलानालामा लगाएको प्रतिवन्धका कारण उनीहरूको पेशा र जिविका संकटमा पर्दै आएको छ । पुरुषहरू फाट्टफुट रुपमा मजदुरी गर्दै आएपनि महिला भने केटाकेटीको हेरचाह र घरायसी काममै दिन विताउँछन् । उनीहरूमा शैक्षिक, सामाजिक र आर्थिक चेतना अभावका कारण जिविकाका लागि आधार समेत पाएका छैनन् ।
प्रकाशित मितिः २०७२ असाेज ५ गते मङ्गलवार